Inona no atao hoe hazavana mahery amin'ny hazakazaka fiara? (aka HDD LED)
Inona no atao hoe hazavana mahery amin'ny hazakazaka fiara?
Famaritana ny LED ny LED HDD & Ahoana no hamaritana ny dikan'ny dikan'ny lelafo?
Ny fahazavana maivana fiara dia maivana kely amin'ny hazavana LED izay manazava isaky ny manomboka ny vakinteny mafy na ny tranokala hafa manorina azy.
Ny fahafantaranao rehefa manampy ny fiara sarotra amin'ny solosaina ny ordinateranao amin'ny ordinatera ka azonao atao ny misoroka ny fampidinana ny solosaina na manindry ny solosaina raha toa ka mbola mahazo fidirana amin'ny rakitra ao anaty fiara ny rafitra miasa , fahadisoana izay mety hiteraka kolikoly amin'ny antotan-dahatsoratra manan-danja.
Ny hazavana fanaovan-drivotra sarotra dia indraindray antsoina hoe LED LED , fiara mafy orina, na endri- drivotra mahery .
Aiza no misy ny LED HDD?
Ao amin'ny birao, matetika ny hazavana asa atao amin'ny hazakazaka fiara dia mipetraka eo anoloana eo amin'ny solosaina.
Amin'ny solosaina finday, ny LED HDD matetika dia eo akaikin'ny bokotra herinaratra, izay indraindray eo akaikin'ny klavier ary amin'ny fotoana hafa amin'ny sisin'ny ordinatera.
Ao amin'ny tablette sy ordinatera hafa kely, ny hazavana fiara mafy dia eo amin'ny faritra sasany amin'ny fitaovana, matetika ny ambany.
Ny rindran-damina ivelany , ny fikolokodinana flash , ny fitahirizam-pifandraisana an-tariby, ary ny fitaovana hafa ivelan'ny ordinatera ivelan'ny solosaina koa dia manana endriky ny asa atao ihany koa. Ny smartphones amin'ny ankapobeny dia tsy manana LED LED.
Miankina amin'ny karazana ordinatera na fitaovana anananao, ny fahazavana maivana amin'ny hazakazaka fiara dia mety misy loko fa matetika fotsy fotsy na mavo. Na dia tsy dia mahazatra aza, indraindray ny fampiasana fiara mafy dia mena, maitso, na manga.
Raha ny endriky ny endrika, ny fahazavana mihazakazaka fiara dia mety ho faribolana madinika na mety ho sarin'ny fiara mafy loko. Indraindray ny LED HDD dia ho endrika toy ny cylinder, maneho ny plastika sikilika izay mamorona ny ampahany amin'ny fiara mafy izay mitahiry ny angona.
Ny jiro fiara matevina sasany dia voalaza ho HDD nefa tsy dia mahazatra loatra noho ny eritreretinao izany. Indrisy anefa, indraindray ianao dia tsy maintsy mamantatra ny LED HDD avy amin'ny herinaratra mandeha amin'ny alalan'ny fitondrantenany (izany hoe ny endriky ny asa fiasa mahery fihetsika dia ilay manjelatra).
Mahaiza mandanjalanja ny toetry ny hazakazaka maivana mandeha amin'ny fiara
Araka ny voalazako tetsy ambony, misy hazavana fiasa mafy hizarana ny endri-tsoratra mba hampisehoana rehefa ampiasaina ny fitaovana fitehirizana. Na dia tsy natao ho fomba famahana ny olana amin'ny ordinatera aza izy io, dia azo ampiasaina matetika izany.
Lozam-pifamoivoizana foana ny Hard Drive ...
Raha mirehitra foana ny fanaovan-tseraseran'ny fiara, indrindra fa rehefa tsy miresaka afa-tsy ny ordinatera dia matetika no famantarana fa ny ordinatera na ny fitaovana dia mihidy na mangatsiaka .
Ny ankamaroan'ny fotoana, ny hany fomba fihetsika eto dia ny manasaraka indray ny tanana , izay matetika midika hoe manongana ny herinaratra herinaratra sy / na manala ny batterie.
Raha mbola afaka mampiasa ny ordinateranao ianao dia andramo indray ny fomba mety ary jereo raha miala ny olana rehefa manomboka miverina.
Ny hazavana maoderina sarobidy dia mitazam-baravarana sy mivoaka ...
Mandritra ny vanim-potoana iray, dia mahazatra ny mahazatra amin'ny fahazoana hazavana ny hazakazaka fiara mivezivezy miverimberina, miverimberina isan'andro.
Ity karazana fitondrantena ity dia midika fa ny rakitra dia nosoratana ary vakiana avy, izay mitranga rehefa misy zavatra maromaro mitranga, toy ny rehefa mandeha ny programa famaha disk, ny programa antibiotika dia mijery, ny rindrambaiko backup dia manohana rakitra, horonantsary dia maka ny download ary ny programa rindrambaiko dia manavao, ankoatra ny zavatra hafa.
Ny Windows dia matetika miandry raha tsy mandeha ny ordinateranao alohan'ny hanaovana asa manokana, izay midika fa mety ho hitanao fa mihodina ny hazavana mihazakazaka mihazakazaka, na dia mbola tsy manao zavatra firy aza ianao. Na dia tsy zavatra mahasosotra azy aza izany, indraindray dia midika fa misy zavatra mampidi-doza tsy mandeha amin'ny fahalalanao, ka raha tianao ny hijery ny solosainao ho an'ny malware .
Ny fomba fijerena ny zavatra sarotra entina miara-miasa
Raha sahiran-doha ianao hoe nahoana no maivana ny hazavana fiara dia ny Task Manager no fomba mora indrindra hanaraha-maso ny programa sy ny serivisy izay miasa ao amin'ny solosainao.
Ny Task Manager dia azo alaina amin'ny alalana Ctrl + Shift + Esc . Avy eo, ao amin'ny tabilao "Processes" dia azonao atao ny mamandrika ny fampiharana sy ny fizotran'ny fampiasana ireo fitaovana maoderina indrindra, toy ny CPU , disk, tambajotra ary fahatsiarovana .
Ny safidy "disk" dia mampiseho ny isa izay ahafahan'ny programa sy programa voatanisa ao anaty fiara mafy, izay toerana tokony hijeranao ny mijery ny anton'ilay hazavana fiara mafy.
Raha toa ka tsy manana safidy ao amin'ny Task Manager ny Windows versionanao , ny safidy Resource Monitor ao amin'ny Administrative Tools dia manana fizarana voatokana antsoina hoe "Processes with Disk Activity" izay ahafahanao mahita izany vaovao izany.
Jereo ny Task Manager: A Complete Walkthrough raha mila fanampiana bebe kokoa amin'ny fandaharana ity programa ity ianao!
Miantehitra bebe kokoa amin'ny Hard Drive Activity Light
Na dia tsy dia mahazatra loatra aza ny sasany amin'ireo mpamokatra solosaina dia tsy mampiditra hazavana fiasan-dàlana mafy.
Raha izany no mitranga amin'ny ordinateranao, na mihevitra ianao fa ny HDD LED izay manana ny solosaina dia tsy miasa (ohatra izany foana), mbola manana safidy vitsivitsy ianao noho ny rindrambaiko malaza.
Ny programan'ny Activité Free Activité dia mihodina ao amin'ny tabilao misy ny rafitrao, manome anao mitovy ny fiasan-drivotra henjana miaraka amin'ny fisintonana hafa raha tianao.
Ny programa hafa maimaim-poana, izay antsoina hoe HDD LED, dia tena dikan-teny avy amin'ny HDD LED tena tianao na antenainao. Raha tsy manana zavatra ilaina ianao, ity fitaovana ity dia fanoloana lehibe ho an'ny zavatra tena izy.
Inona no atao hoe latabatra masaka?
Inona avy ireo serivisy I / O amin'ny ordinatera?
Inona no atao hoe Backup Idle?
Inona no atao hoe Code Beep?
Inona no atao hoe Attribution File?
Ahoana ny fametrahana Bluetooth fitaovana amin'ny PC?
Inona ny USB 2.0?
10 tsara indrindra fanaovana lisitry ny lisitry ny lisitra
Tsy mitovy ny fifandraisana amin'ny iPhone 5S sy 5C
Afaka horonan-tsarimihetsika DVD aho ve na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao?
Jettison: Tom's Mac Software Pick
Ny drafitra fanodinana tsy misy fetra ny Wipster
Manandrana ny Desktop Fahatelo - Fizarana 8 - Fomba fanovozan-kevitra
Ny Seven Rainbow Tom Clancy: Siege PS4 Review
Rahalahy MFC-5890cn All-in-One Printer
Ahoana ny fomba hamindranao ny taratasy nalefanao ho an'ny Mac vaovao
Miaraka amin'ny Pioneer SP-PK22BS Home Theater Speaker System
Ny 8 Best PlayStation 4 Accessories mba hividy amin'ny 2018
Ny 10 Best Drones mba hividy amin'ny 2018
Nahoana aho no tokony hanamboatra ny ordinateran'ny Windows sy ny matetika?
Call of Maps Maps
Inona ny IPSW File?
Sonoro Cubo Modèle AU-1300 CD Player / Clock Radio Review
Mitadiava ny data miaraka amin'ny Excel LOOKUP Function
OWC ThunderBay 4 - Amboaran-tononkalo mamirapiratra
Ahoana ny fomba hanaovana pikantsary ambanin'ny Windows sy ny mailaka